Sidaas, haddii aad rabto si ay u tagaan oo ku saabsan qaar ka mid ah safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Amsterdam, aad leedahay si aad doorato meel sax ah. In this article, aan dabooli doonaa shan safarada maalin top aad qaadi karto ka Amsterdam. Sidoo kale, waxaan idin siin doonaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay iyo sida ay u gaaraan meelahan tareen. By dhamaadka waslad, waxaad yeelan doontaa wax kasta oo aad u baahan si ay u bilaabaan tacabur cajiib ah ka Amsterdam!
Out of dhan safarada maalinta ka Amsterdam oo aad qaadi karto, Hague waa mid waa in aan la seegay. Sababta ugu weyn ee waayo, waa xaqiiqda ah in Hague ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu muhiim ee Nederland. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan.
Hague waa fadhiga dhexe ee dawladda ee Nederland, si aad u rajeynayaan in ay arkaan wax badan oo ka mid ah dhismayaasha cajiib ah. Magaaladu waxay sidoo kale waa meel ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, taas oo kale waa in uu arko meel.
Haddii aad go'aansato in aad magaaladan yaab si ay u tagaan, waxaad yeelan doontaa kun oo sano oo taariikhda si ay u bogi. In xarunta aad u of magaaladuna waxay u dhisnayd cathedral weyn. Waa mid ka mid ah ugu meelo cajiib ah cibaadada waxaad ka heli doontaa si aad u aragto oo dhan of Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Saffarada Day From Amsterdam By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)